मध्यान्न | Freeing My Mind
मान्छे दुइ प्रकारका हुन्छन्। एकप्रकारका प्रतिनिधि पात्र चाँहि उनी हुन् भने अर्कोको चाँहि म।
उनका प्रकार गफी हुन्छन्। प्रत्येक वाक्यमा कुनै कथा सम्झन्छन्। प्लेटमा आलु फ्राइ लिएर उनी सामुन्ने पर्नु ,उनी ‘एउटा साथी थियो’ भनेर सुरु भइहाल्छन्। त्यही साथीकै कुरा सिध्याउँ। साथी थियो रे , उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘बडो चाटुस’। आलु डिप फ्राइ गरेको भन्यो भने , ‘ए इनारमै पकाको?’ भनिहाल्ने। लघु कथाको अन्त्य र श्रोता माझ हाँसोको माहोल।
‘क्या चाटुस!’ एउटा सहमति जनाउँछ।
‘पूर्वकै थियो कि क्या हो !’ अर्को बाठो टोपलिन्छ।
गफीलाई कत्रो प्रोत्साहन! अनि त लघु कथाको सिरिज नै चल्छ।
अब मेरो प्रकारको कुरा गरो । म चाहिँ हरेक मध्यान्न यी गफी र उनका श्रोता माझ बस्छु, खाना खान्छु र हिँड्छु। बुझे हाँस्छु र नबुझे चाहिँ पुरुषका ठ्टटा होला भनेर चुप लागेर बस्छु। र धेरै छिटो खाएको बेला चाहिँ गफीका कुरा बारे ब्लग गरेर नबोलिकनै गफ हाँक्छु! 😀 हा हा हा
Posted in Nice talkin to me and tagged conversations, midday on January 23, 2009 by Darshan.3Comments
← Meeting afterthoughts
पुतलीको देह →
साह्रै गफाडि !
मलाई पनि डाउन गर्लान जस्तो छ उनले त !
भनेपछि, “आलु इनार मै पकाको हो?”
कति रमाईलो त हौ काम त ॥॥
गज्जबका रहेछन्। खासमा मलाई पनि उनीजस्तै हुने रहर छ:)